There was never talk of GNU with Tsvangirai, says Zanu-PF - The Zimbabwe Mail
HomeHeadlinesThere was never talk of GNU with Tsvangirai, says Zanu-PF
February 16, 2019 Staff Reporter Headlines, Politics 0
In a statement yesterday, Zanu-PF Secretary for Legal Affairs Paul Mangwana said the lies by Mr Chamisa were also meant to malign President Mnangagwa.
Mangwana said there was never a promise of a Government National Unity (GNU).
Mangwana said there was never direct communication between President Mnangagwa and the late Morgan Tsvangirai.
“In my capacity then as Zanu-PF Deputy Secretary for Legal Affairs and Lovemore Matuke, in his capacity then as Zanu-PF Chief Whip, we were tasked with representing Zanu-PF in talks with the MDC-T in the processes regarding the former president’s impeachment.
Mangwana said it was sad that Mr Chamisa wanted to abuse the dead as an undemocratic plot to enter Government through the back door.
published 33928 articles